Works Archives — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
काम काम काम काम काम काम काम काम काम काम काम काम काम काम
एयर Jordans प्रतिष्ठित छन्. म तिनीहरूलाई धेरै हुनत बढन लगाउने छैन, मेरो आमाबाबुले मलाई हास्यास्पद महंगा जूता किन्न इन्कार गर्ने. म यसलाई मन थिएन, तर म कहिल्यै एक जोडी मा मेरो हात प्राप्त हुनेछ थाह थियो. तिनीहरूले अवस्थित छैन ढोङ गरेर - त्यसैले म सामना गर्न बाध्य भएको थियो. यो वर्ष एक लामो दम्पतीले Reebok पार प्रशिक्षक स्टाइलिश थिए आफैलाई विश्वस्त गर्न प्रयास थियो. तर म पुरानो पायो रूपमा, म बुझे Jordans बेवास्ता गर्न कठिन थिए. मेरो साथी को सबै एक जोडी वा दुई थियो, र मेरो साथी को एक downright तिनीहरूलाई आसक्त थियो.
जब नयाँ शैली बाहिर आए, उहाँले केही मुक्त समय थियो जब बस स्थानीय फुट लकर द्वारा बंद; त्यो प्राप्त आफ्नो जीवनको निर्माण नयाँ जोडी. उहाँले निश्चित गरे उनले सबै यर्दन जारी मिति थाह, उहाँले विभिन्न रंग मा नै जूता किनन हुनेछ, र उहाँले अक्सर जुत्ता स्टोर अगाडि बाहिर छाउनीमा बसोबास शनिबार बिहान खर्च हुनेछ. यो मेरो मन उडायो. त्यसैले अन्तमा म सोध्न थियो, “के यी जूता बारेमा यति विशेष छ?! कुरा स्पष्ट छ म केहि बञ्चित छु।”
Jordans मेरो साथीको obsession एक बयान गरे. साँचो वा छैन, he was saying loud and…